အညိုရောင်မျောက်ပင့်ကူ - ဝီကီပီးဒီးယား
Unrecognized taxon (fix): Ateles
I. Geoffroy, 1829
Brown spider monkey range in green
အညိုရောင်မျောက်ပင့်ကူ၏ သိပ္ပံအမည်မှာ အေတီးလက်စ် ဟိုက်ဘရီးဒတ်စ် ဖြစ်သည်။ မျောက်ပင့်ကူ၏ မျိုးပြုန်းတီးလုနီးပါး အခြေအနေရှိသော မျိုးစိတ် ဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာသစ်မျောက် ဖြစ်သည်။ ကိုလံဘီယာမြောက်ပိုင်းနှင့် ဗင်နီဇွဲလားအနောက်တောင်ပိုင်းတို့တွင် တွေ့ရသည်။
အညိုရောင်မျောက်ပင့်ကူသည် ကိုယ်ရှည်လျားပြီး လက်တံ၊ ခြေတံများလည်း ရှည်လျားသည်။ ယင်းအပြင် ခြေ ချောင်းတစ်ခုနှင့် တစ်ခုအကြားတွင် ပါးလွှာသောအရေပြားဆက်ထားခြင်းကလည်း ထူးခြားမှုတစ်ခု ဖြစ်သည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် အညိုရောင်မျောက်ပင့်ကူတစ်ကောင်၏ အမြီးအရှည်မှာ ၇၅ စင်တီမီတာ ဖြစ်သည်။
၂ ပျံ့နှံ့ကျက်စားခြင်းနှင့် အလေ့စရိုက်
၃ အစားအစာနှင့် သားပေါက်ပုံအလေ့အထ
သွယ်လျသောကိုယ်ထည်နှင့် ခြေတံ၊ လက်တံများကို လိုသလို ဖန်တီးနိုင်ခြင်းကြောင့် မျောက်ပင့်ကူဟု ခေါ်တွင်ခြင်း ဖြစ်သည်။ အညိုရောင်မျောက်ပင့်ကူအထီးတစ်ကောင်၏ ကိုယ်အလေးချိန်မှာ ၇.၉ ကီလိုဂရမ်မှ ၉.၁ ကီလိုဂရမ်အတွင်း ရျိသည်။ အမ၏ကိုယ်အလေးချိန်မှာ ၇.၅ ကီလိုဂရမ်မှ ၉ ကီလိုဂရမ်အတွင်း ရှိသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် အရွယ်ရောက်ပြီးမျောက်ပင့်ကူတစ်ကောင်၏ ကိုယ်အရှည်မှာ ၅၀ စင်တီမီတာခန့် ရှိပါသည်။ ကိုယ်အရောင်အဆင်းမှာ ဦးခေါင်းအပါအဝင် အညိုရောင်နှင့် အနက်ရောင်တို့ ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းထားခြင်း ဖြစ် သည်။ သို့သော်လည်း မျက်လုံးအရောင်မှာမူ အပြာရောင်ရှိသည်။ သက်တမ်းမှာ ၂၇နှစ်ခန့် ဖြစ်သည်။ သို့သော် လည်း ၎င်းသက်တမ်းထက် ပိုမိုနေထိုင်နိုင်ကြသည်။
အညိုရောင်မျောက်ပင့်ကူများအား ကိုလံဘီယာနိုင်ငံရှိ မာဒါလီနာ သုတေသနဌာန၏ ရီယိုမာဒါလီနာ သစ်တောကြိုးဝိုင်းအတွင်း ကောင်ရေအနည်းငယ်မျှ တွေ့မြင်ရပါသည်။ ၎င်းတို့အား အမြင့် မီတာ ၂၀ မှ ၇၀ဝ အတွင်းရှိ ဒေသများတွင် တွေ့ရပါသည်။ အညိုရောင်မျောက်ပင့်ကူများသည် သစ်တောများထူထပ်သောနေရာမျိုးတွင် သာ ရွေးချယ်နေထိုင်ကြပါသည်။ သို့သော်လည်း ယနေ့အချိန်တွင် ၎င်းတို့ ကျင်လည်ရာ ရေမြေတောတောင် များ ပျက်စီးဆုံးရှုံးလာမှု၊ သစ်တောများ ခုတ်ထွင်ရှင်းလင်းလာမှုနှင့် အမဲလိုက်ဖမ်းဆီးသတ်ဖြတ်မှုများကြောင့် အညိုရောင်မျောက်ပင့်ကူများမှာ မျိုးပြုန်းတီးပျောက်ကွယ်မည့်ဘေးနှင့် ရင်ဆိုင်ရလျက် ရှိနေပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ မျိုးသုဉ်းရှားပါးလာမှုကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်သည့်အနေဖြင့် မာဒါလီနာ သုတေသနဌာနက ထိန်းသိမ်းစောင့် ရှောက်မှု ပေးထားပါသည်။
အညိုရောင်မျောက်ပင့်ကူများ၏အစားအစာမှာ မျောက်များ၏အစားအစာအတိုင်းပင် ဖြစ်ပြီး သစ်သီး၊ သစ်ဥများ ကိုသာ အဓိကစားသောက်တတ်ပါသည်။ အထူးသဖြင့် အရည်ရွှမ်းသောသစ်သီးများကို ရှာဖွေစားသောက်တတ် ပါသည်။ ထို့ပြင် သစ်ရွက်နုများ၊ ဝါးရွက်နုများကိုလည်း စားတတ်သည်။ အသက်ငါးနှစ်အရွယ်မှစပြီး ကြင်ဖက် ကို ရှာဖွေတတ်သည်။ မိတ်လိုက်ရာသီ သီးခြားမရှိပေ။ မွေးဖွားလာသည့် အကောင်ပေါက်ကလေးသည် အရွယ် ရောက်သည်အထိ မိဘများနှင့် အတူနေထိုင်လေ့ရှိသည်။
↑ Groves၊ C.P. (2005)။ Wilson၊ D.E.; Reeder၊ D.M. (eds.)။ Mammal Species of the World: A Taxonomic and Geographic Reference (3rd ed.)။ Baltimore: Johns Hopkins University Press။ p. 151။ OCLC 62265494။ ISBN 0-801-88221-4။ CS1 maint: ref=harv (link)
↑ Urbani, B. (2008). "Ateles hybridus". IUCN Red List of Threatened Species 2008. IUCN. doi:10.2305/IUCN.UK.2008.RLTS.T39961A10280054.en.
↑ Emmons, L. H. (1997). Neotropical Rainforest Animals. 2nd edition. Pp. 144. ISBN 0-226-20719-6
↑ (Ankel-Simons, 1999;[full citation needed] Fleagle, 1999;[full citation needed] Morales Jiménez, 2007;[full citation needed] Takahashi, 2008)[full citation needed] Arauca (Hernández-Camacho and Cooper
↑ Urbani, B.; Morales, A. L.; Link, A. & Stevenson, P. (2008). "Ateles hybridus". IUCN Red List of Threatened Species. IUCN. 2008: e.T39961A10280054. doi:10.2305/IUCN.UK.2008.RLTS.T39961A10280054.en
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အညိုရောင်မျောက်ပင့်ကူ&oldid=503676" မှ ရယူရန်
ကိုလံဘီယာနိုင်ငံတွင် တွေ့ရှိရသော နို့တိုက်သတ္တဝါများ
ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံတွင် တွေ့ရှိရသော နို့တိုက်သတ္တဝါများ
ဤစာမျက်နှာကို ၁၇ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၀၊ ၁၅:၄၀ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။